Soomaaliya oo bilowday dhaqan gelinta sharciga duulista Rayidka | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Soomaaliya oo bilowday dhaqan gelinta sharciga duulista Rayidka
Dowladda Soomaaliya ayaa Maanta sirasmi ah u bilaawday dhaqangelinta sharciga duulista hRayidka Soomaaliya oo uu Maanta saxiixay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,kadib markii ay horay u ansixiyeen Xildhibaannada labada Aqal.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u magacaabay Maareeyaha Guud ee Hay’adda Duulista Rayidka Mudane Axmed Macalin Xasan, wuxuuna Eebe uga baryay inuu la garab galo masuuliyadda culus ee loo igmaday.
Magaalada Muqdisho waxaa Galabta lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayay dhaqangelinta Sharciga duulista Rayidka Soomaaliya,taas oo ay ka qeyb galeen, Xildhibaano, Wasiiro iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Qaar kamid ah madaxdii ka qeyb-gashay Munaasabadda ayaa waxaa ay sheegeen in sharcigaan uu muhiim u yahay dadka iyo dadka Soomaaliyeed,iyaga oo u mahad celiyay Madaxda ugus areysa dowladda Federaalka Soomaaliya.
Maareeyaha Guud ee Hay’adda Duulista Rayidka Mudane Axmed Macalin Xasan ayaa dhankiisa ka hadlay sida ay u socota Shaqada Hay’adda duulista Rayidka,waxaana uu sheegay in xilligaan Hawada Soomaaliya aysan jirin qof Ajnabi ah oo maamulaya.
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Salaad (Oomaar) ayaa sheegay in la soo geba-gabeeyay qorsihii lagu dhisayay Hay’adda duulista Rayidka Soomaaliya,isla markaana dadaal badan ay ku bixiyeen.
Soomaaliya oo bilowday dhaqan gelinta sharciga duulista Rayidka was last modified: June 23rd, 2020 by Admin